Usebheke ukuba ngowokuqala ukushaya iSundowns oweStellies - Impempe
Usebheke ukuba ngowokuqala ukushaya iSundowns oweStellies
Abadlali beStellenbosch FC
Imiphumela emibili edlule yeStellenbosch FC emidlalweni yeDStv Premiership iwona umjovo obudingwa yileli qembu laseKapa ngokusho komqeqeshi walo uSteve Barker.
Ukusho lokhu ngoLwesithathu eqeda ukunqoba ngo 3-1 kwiBaroka FC okuyiyona ewabone kuqala lapho egxunyekwe ngakhona amapali ePeter Mokaba Stadium, ePolokwane, eLimpopo.
IStellies ifike kulo mdlalo ihambela phezulu kwazise iwaqoqe egcwele amaphuzu emdlalweni womkhaya neCape Town City ngempelasonto.
Lo mqeqeshi oseke wapheka AmaZulu ne-University of Pretoria uthi lokhu okwenzekile ikhona kanye obekudingwa yiqembu lakhe njengoba seziya kuvuthondaba.
“Imizuzu yokuqala eyishumi bebesithwalise kanzima kodwa ngenhlanhla sakwazi ukumelana nalokho. Sibe sesiba nenhlanhla futhi ngokwenziwe yisimo sezulu.
“Ngemuva kwalokho sithe ukuphazamiseka kancane yize bese sithole nethuba lokuxoxa ngesikhathi umdlalo umile.”
Yize iBaroka kuyiyona elithole kuqala igoli kodwa uBarker uzishaya isifuba ngendlela abadlali bakhe abalwe ngayo ngemuva kwalokho.
“Balisebenzisile ithuba labo ngesikhathi thina sisaphambana nalo kodwa ngemuva kwegoli (labo) bekuyiStellenbosch kuphela iqembu ebelenza izinto kulo mdlalo.
“Sikucacisile ukuthi besiwufuna ngaphezulu kwabo lo mphumela. Ngizishaya isifuba ngabadlali ngoba bakhombisile ukuthi bebengahleli kahle ngenxa yalesi lesi simo ebesikusona kulezi zinyanga ezedlule.
“Kule midlalo emibili edlule esiyiwinile kungenzeka ukuthi sithole wona mjovo ebesiwudinga kakhulu njengoba isizini isiya ngasekugcineni. Ukuthola amawini amabili kule ligi akuyona into okulula ukuyenza,” kusho yena.
Unethemba lokuthi ukuzethemba okutholwe abadlali bakhe kule midlalo edlule yikhona okuzobenza baye kule esele ngokuzethemba.
“Umdlalo wethu olandelayo unzima futhi sibhekene neqembu elingcono kunawo wonke ezweni. Kuhle lokhu ngoba nathi sinesifiso sokufana nalo leli qembu ngakho leli yithuba elikahle lokuzihlola ukuthi sigqagqene kangakanani nalo,” kusho yena.
IStellies izovakashelwa yiMamelodi Sundowns emdlalweni olandelayo. UBarker ukholwa ukuthi bangawina, babe ngabokuqala ukuzwisa iMasandawana ubuhlungu benduku kule sizini.
Previous Previous post: Ayimgculisanga inkundla yaseMdantsane uMcCarthy waMaZulu
Next Next post: OweChiefs uthi kulula kwiChampions League kunakwiDStv Premiership